FAAHFAAHIN: Khasaarihii Weerarkii Dhismaha CID-da iyo Al-shabaab oo Sheegatay |
FAAHFAAHIN: Khasaarihii Weerarkii Dhismaha CID-da iyo Al-shabaab oo Sheegatay
Ugu yaraan 15 ruux oo ay ku jiraan Kooxihii weerarkan ka dambeeyay ayaa ku geeriyooday Weerarro is-miidaamin iyo toos ah oo xoogag ka tirsan Al-shabaab ay maanta ku qaadeen xarunta CID-da ee Muqdisho, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 20-qof.
Dadka Geeriyoooday ayaa waxaa ku jira shan qof oo la sheegay inay doonayeen in ay gudaha u galaan xaruntaas, balse la toogtay intii aysan gaarin dhismaha xarunta CID-da oo ku dhaw isgoyska Lamabar Afar ee Muqdisho.
Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Somalia ayaa gaaray goobta, inkastoo uusan ahayn mid buuran khasaaraha burburka ah ee xarunta soo gaaray, waxaana mid ka mid ah kooxaha weerarka qaaday lagu dilay illinka hore ee xarunta.
Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkan isugu jiray qaraxyo iyo kuwa tooska ah, waxaana afhayeenka hawl-gallada ee Al-shabaab. C/casiis Abuu-Muscab uu sheegay inay beegsanayeen saraakiil Somali iyo Ajnabi ah.
Dhawaan ayay ahayd markii Muqdisho ay soo gaareen saraakiil sare oo ka socday booliiska gobolka Minnesota, kuwaasoo sheegay inay tababarro siin doonaan ciidamada booliiska Somalia, gaar ahaan sida dambiyada loo baaro.
Lix Mooto oo ah kuwa loo yaqaanno Bajaajta oo meesha marayay ayaa waxaa kasoo gaaray khasaare xooggan qaraxyadan, waxaana rakaabkii la socday qaarkood soo gaaray Dhaawacyo Culus.Waxaana mas’uuliyiinta dowladda Somalia ay sheegeen in Qaraxan ay horay uga heleen warbixin, laakiinse uu si lama filaan ah ku dhacay.
Sidoo kale, Isbitaallada Muqdisho ayaa waxaa la dhigay dhaawacyada in ka badan 20-qof, kuwaasoo dhammaantood ahaa shacab, waxaana laba ka mid ah ay ku dhinteen Isbitaalka Madiina.
Ugu dambeyn, Weerarkan ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo dhawaan mudane horay uga tirsanaa iyo wiil kale ay fuliyeen qaraxyo aad u culus oo agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho ka dhacay, kuwaasoo ay ku dhinteen 15-qof, ayna ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan.